1979: Desionizatsiya nke Valerii Emelyanov bipụtara (1929 - 1999).
1986: Obshestvo Volkhov (Association nke Volkhvs, ndị maara ihe ma ọ bụ ndị dibia amị) hiwere na Leningrad site na Viktor Bezverkhii (1930 - 2000). Na 1990, obodo gbanwere aha ya Soyuz Venedov (Union nke Veneds).
1990: Kupala tọrọ ntọala. A họpụtara Vseslav Svyatozar (1955 -) ka ọ bụrụ onye isi obodo.
1992: mbipụta mbụ nke Velesova Kniga (Akwụkwọ Veles) nke Aleksandr Asov (1964 -) bipụtara n'okpuru pseudonym Bus Kresen.
1992: Drevnerusskaya Ingliisticheskaya Tserkov 'Pravoslavnykh Staroverov-Inglingov Onye (DITPSI, Old Russian Ingling Church of Orthodox Oldbeliever-Inglings, nke a bụ Church Ingling) hibere na Omsk site n'aka Aleksandr Khinevich (1961 -).
1993: Slavyano-goritskaya bor'ba. Iznachalye (Slavic tumulus ọgụ. Mmalite) bipụtara Aleksandr Belov (Selidor, 1957 -).
1994: Moskovskaya Slavyanskaya Yazycheskaya Obshchina (Moscow Slavic Pagan Community) debara aha ya dị ka nzukọ okpukpe.
1997: Soyuz Slavyanskikh Obshchin (Union of Slavic Communities) hiwere na Kaluga. A họpụtara Vadim Kazakov (1965–XNUMX) ka onye isi obodo. Mgbe e mesịrị renamed dị ka Soyuz Slavyanskikh Obshchin Slavyanskoi Rodnoi Nnọọ (SSO SRV, Union of Slavic Communities of Slavic Native Faith).
1997: Russkoe Osvoboditel'noe Dvizhenie (Russia Liberation Movement) guzobere Aleksei Dobrovol'skii (Dobroslav, 1938 - 2013).
1998: Obodo Rodolyubie (ịhụnanya nke Rod) tọrọ ntọala. A họpụtara Il'ya Cherkasov (Veleslav, 1973) ịbụ onye isi obodo.
1999: Nzukọ nche anwụ Velesov Krug (VK, Circle of Veles) tọrọ ntọala. A họpụtara Il'ya Cherkasov ka ọ bụrụ onye isi obodo.
2002: Krug Yazycheskoi Traditsii (KYaT, Circle of Pagan Tradition) hiwere site na Bitsevskoe Obrashchenie na Bitsevskii dogovor (Nkwekọrịta Bitsa).
2009: A machibidoro Ingka Ingling iwu dịka nzukọ na-emebiga ihe ókè. Onye ndu ya, Aleksandr Khinevich nwetere mkpọrọ nwa oge afọ abụọ.
2009: Nọmba mbụ nke akwụkwọ akụkọ ahụ Rodnoverie e bipụtara.
2009: SSO SRV na KYaT weputara nkwuputa okwu banyere “mgbanwe na nghota nke asusu na omenaala nke Slav na ndi ochichi nke ndi Pagan,” nke katọrọ oru ndi edemede ufodu dika ndi n’enweghi sayensi, tinyere onye isi nke ndi ulo uka Ingling, Aleksandr Khinevich
2011: Vadim Kazakov gbara arụkwaghịm na onye ndu nke SSO SRV. Maksim Ionov (Beloyar, 1971 -), onye Kazakov kwadoro, ka a hoputara dika onye isi ohuru nke nzukọ a.
Rodnoverie enwebeghị nsogbu ọ bụla etinyere na ya, ya mere, ọ gaghị ekwe omume ịkọwapụta oge ọ bụla ma ọ bụ ọbụlagodi ebe ọ pụtara. N'ime oge Soviet niile, a pụrụ ịchọta echiche edoghị anya nke Okpukpe dị ka echiche ụwa, nkà ihe ọmụma, ma ọ bụ okpukpe na nka, akwụkwọ, na nkà ihe ọmụma. Agbanyeghị, nkwupụta izizi ọha mmadụ nke Paganism dị ka okpukperechi bụ akwụkwọ Desionizatsiya nke Arabist Valerii Emelyanov dere n’afọ 1979. Akwụkwọ ahụ, nke e bipụtara na nke mbụ ya na Syria, kwuru na ikpere arụsị bụ okpukperechi kachasị arụ ọrụ nke ọma iji lụso “nkata ọjọọ mba ụwa”, nke bụ isi okwu n’akwụkwọ ahụ. Desionizatsiya enweghi obere ikwu banyere ozizi ma ọ bụ ememe okpukpe nke Okpukpe, ma ọtụtụ n'ime echiche ya nwere ike ịchọta n'akwụkwọ akwụkwọ mba na akwụkwọ mgbochi Rodnoverie na-emegide ndị Juu. N’afọ 1980, Emelyanov nyefere onwe ya n’ụlọ ọgwụ mgbaka maka igbu nwunye ya ma hapụ ya mgbe afọ isii gachara. Ọ sonyere na nzukọ ama ama ama ama Russia, Pamyat, ma a manyere ya ịhapụ ya, n'ihi echiche okpukpe ya. Emelyanov hiwere nke ya Pamyat na ntọala ya na Aleksandr Belov (Selidor) na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mba n'anya Aleksei Dobrovol'skii (Dobroslav) otu n'ime ndị otu Rodnoverie mbụ, ndị Moskovskaya Slavyanskaya Yazycheskaya Obshchina na njedebe nke 1980s.
O siri ike n'otu oge ahụ na Leningrad, mana o doro anya na ọ nweghị njikọ ọ bụla na ndị ọgọ mmụọ nke Moscow, ihe nzuzo ọzọ, onye na-eme ihere mba n'anya na onye na-emegide ndị Juu. Obshestvo Volkhov, bụ onye nkụzi mahadum nke Marxism-Leninism, Viktor Bezverkhii (Ded, Ostromysl) guzobere na 1986. Ndị ụmụ akwụkwọ Bezverkhii bụ ndị mejupụtara obodo ahụ ma ndị KGB dọọ ya aka ná ntị maka ọrụ ya. Na 1990, Bezverkhii nwere ike ihiwe nzukọ ọhụrụ, nke na-arụ ọrụ n'ihu ọha ugbu a, ndị Soyuz Venedov. Obodo ahụ mechara kewaa alaka atọ ma mesịa banye Soyuz Venedovs asọmpi abụọ. Na 2000s, ọ nọ na Veche zuru ụwa ọnụ, nzukọ nke chịkọtara ndị na-eso ụzọ Okpukpe Slavic na mba ndị dị ka Belorussia, Poland, Ukraine, Serbia, Bulgaria, na Slovenia.
Soyuz Venedov dị mkpa maka mmalite nke ihe ngosi a na-efe arụ na St. Petersburg. N'ihi na ịmaatụ, na mbido afọ 1990 otu n'ime ndị na-akwado obodo a, onye nkuzi ụlọ akwụkwọ ọta akara, Vladimir Golyakov (Bogumil II Golyak, 1968 -), hibere otu nzukọ akpọrọ Shag Volka nke ahụ nyere “ọgwụ Slavic,” na 1997 kwa, òtù Rodnoverie Skhoron Ezh Sloven (SES). [Foto dị n'aka nri] Obodo a wuru ụlọ nsọ na mpaghara ndịda nke obodo ahụ, ebe ọ na-eme ememe ugboro atọ kwa izu ruo 2007, mgbe obodo ahụ wepụrụ ụlọ nsọ ahụ, ndị obodo ga-achọta ebe ọhụrụ maka ememe ya. Golyakov na-ekwu na ọ ga-aga n'ihu na agbụrụ ezinụlọ nke Volkhvs (ndị amamihe ma ọ bụ ndị amoosu) nke gaferela ihe ọmụma site na narị afọ nke iri na otu ma wepụta aha Onye Isi Nchụàjà nke Slav niile (Verkhovnyi zhrets vsekh slavyan). N'etiti ndị otu a bụ ndị isi nchacha na, na 2003, Golyakov natara ntaramahụhụ afọ ise maka ịwakpo ụlọ ọrụ nke nzukọ a ma ama na-ahụ maka ihe ndị ruuru mmadụ, Memorial. Na 2007, Golyakov natara ọtụtụ mgbasa ozi ebe ọ, na-eyiri uwe nke Slavic Volkhv, tinye onwe ya n'ihu onye Nationalist Russian March na St. Petersburg, si otú a yie ka ọ ga-eduga ya, n'agbanyeghị na ọ nweghị mgbakwunye na ndị nhazi. nke njem.
Na 1980s, na mgbakwunye na nke ịhụ mba n'anya, echiche nke Paganism bidoro pụta n'etiti ndị nwere ọgụgụ isi, nwere mmasị na mysticism na ọnọdụ ime mmụọ ọzọ, ọkachasị ọdịnala ndị dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ. Otu n'ime ndị isi ndị ọgọ mmụọ nọ n'agba ndị a bụ akparamàgwà mmadụ, Grigorii Yakutovskii (Vseslav Svyatozar), onye tọrọ ntọala obodo Kupala na 1990. Shamanism nwere ọrụ dị mkpa na nkuzi nke Yakutovskii, n'agbanyeghị na ụfọdụ Rodnovers boro ya ebubo eclecticism. Obodo ọhụrụ Kolyada mechara kewapụ na Kupala wee mepụta njikọ na obodo Vyatichi. Obodo ndị a rụrụ ọrụ dị mkpa mgbe e mesịrị na nhazi nke nzukọ nche anwụ Krug Yzycheskoi Tradititsii, nke gosipụtara obere akụkụ mba nke Rodnoverie (Aitamurto 2016: 6-52).
Ọtụtụ ndị na-ege ntị ruru isiokwu dị iche iche banyere ọdịnala okpukpe Slavic nke Aleksandr Asov dere na magazin a ma ama. Nauka i Religiya na njedebe nke 1980s. Na 1992, Asov bipụtara mbipụta mbụ nke ihe odide ahụ Velesova Kniga (Akwụkwọ nke Veles), nke a na-azọrọ na o nwetara site na narị afọ nke itoolu. Ọ bụ ezie Velesova Kniga Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu olu kwupụtara na ọ bụ akwụkwọ edemede n'etiti ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme, ọtụtụ mbipụta nke Asov rere ọtụtụ nde. Ọtụtụ ndị Rodnovers gbachitere eziokwu nke Akwụkwọ Veles ma ọ dịkarịa ala ruo 2000s, ọ bụ ezie na n'oge a, ọnọdụ siri ike karị enwetawo ala. Na Velesova Kniga enweela mmetụta dị ukwuu na nhazi nke Rodnoverie, Otú ọ dị, Asov n'onwe ya enwetabeghị ikike n'ọchịchị ahụ. Otu n'ime ihe kpatara nke a bụ na e boro ya ebubo na ọ na-echekwa ego ya na izu ohi akụ nke mba site na ịnwe ikike nwebisiinka nke mbipụta nke Velesova Kniga.
N'ebe dị iche iche, agbanyeghị, egwuregwu ọgụ “mgbe ochie Russia”, Slavyano-goritskaya bor'ba, nke Aleksandr Belov mepụtara enwetawo nlebara anya zuru ebe niile. Na 1990s, nzukọ a nwere ọtụtụ narị klọb mpaghara. Na nkà ihe ọmụma Belov, ikpere arụsị nwere mmụọ agha, klọb ahụ dọtakwara ọtụtụ ndị mmadụ na mba ha, gụnyere isi isi (Meranvil'd 2004).
Na 1999, ochicho ohuru nke Okpukpe nwere ohere n'etiti ndi ntorobia ndi isi obodo site na akwukwo Udar Russkikgh Bogov (The Strike of Russian Gods) nke pseudonym Istarkhov dere. Okpukpe ndị ọgọ mmụọ ghọrọ ihe a ma ama n'etiti ndị isi Russia, ọ bụ ezie na ọ na-abụkarị obere ihe omume ma ọ bụ ọbụna echiche ozizi. Enwere ọtụtụ okwu, mgbe ndị mmadụ na ndị otu na-eme mwakpo agbụrụ ma ọ bụ mgbochi ndị Juu, na-akọwa onwe ha dị ka ndị ọgọ mmụọ ma ọ bụ Rodnovers (Shnirel'man 2013). Ka o sina dị, ha enweghị njikọ ọ bụla na otu ụlọ ọrụ Rodnoverie.
Ntọhapụ okpukpe na njedebe nke 1990s nyere ohere iji gosipụta okpukpe n'okpukpe, mana ejighị ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na akụ na ụba mara oge ahụ. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị otu Pagan ma ọ bụ ndị otu na 1990s bụ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị gbadoro ụkwụ na mmemme sitere na ultra-right to the ultra-left ma, dị ka a na-achị, ndị na-edebanye aha echiche mba. Otu n'ime ihe kachasị iche, mana ọ gara nke ọma bụ ngagharị ahụ Kontseptiya Obshchestvennoi Besopasnosti (echiche nke Social Security, KOB), nke dabere na nkwupụta dị ukwuu nke usoro ụwa, nke ndị isi nzuzo na-enweta site na Freemason oge ochie. N'oge ọ dị elu, òtù Stalinist a n'ihu ọha kwuru na ha nwere ndị otu 50,000. Ndị KOB guzobere otu nnọkọ, Edinenie, nke meriri pasent 1.17 nke ntuli aka na ntuli aka ndị omeiwu na 2003 (Moroz 2005). Ndị KOB kwenyere na okpukpe ndị ọgọ mmụọ, mana okpukperechi anaghị ebute ụzọ n'echiche ya. N'ihi ya, o yiri ka ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iche na ọtụtụ ndị na-akwado ya echeghị na KOB dị ka nzukọ ndị ọgọ mmụọ ma ghara ịkọwa onwe ha dị ka ndị ọgọ mmụọ.
Ná ngwụsị nke narị afọ iri, ụfọdụ òtù ndị na-ahụ mba n'anya malitere ị paya ntị nke ọma n'ememe na nkà mmụta okpukpe. Na ntughari, ha tụkwasara onwe ha anya na ọnọdụ “okpukpe nke ndị ọgọ mmụọ”, kama ịbụ ịhụ mba n'anya. N'ihu mmalite nke mmepe a bụ Soyuz Slavyanskikh Obshchin Slavyanskoi Rodnoi Nnọọ (SSO SRV), nke, dịka ọmụmaatụ, malitere ịtụ anya na ndị sonyere na-eji ejiji ọdịnala Russia maka emume. Na ngwụsị afọ ndị 1990, onye isi SSO SRV, injinia Vadim Kazakov, onye bipụtarala akwụkwọ banyere aha ndị Russia na ọdịnala okpukpe Slavic, wepụtara okwu a "Rodnoverie," nke sitere n'okwu ndị obodo (rodnaya) na okwukwe (vera). Ọbụnadị taa, ọtụtụ ndị na-akwado Slavic Paganism kpọrọ okpukpe ha "Okpukpe Okpukpe" ma ọ bụ jiri okwu ndị ọzọ na-ezo ya aka. Otú ọ dị, kemgbe ọtụtụ afọ, okwu Rodnoverie eguzobewo n'ime usoro ahụ. Otu n'ime isi ihe kpatara ya bụ na ọ nweghị ụdị echiche na-adịghị mma na okwu ndị ọgọ mmụọ (yazychestvo) nwere n'asụsụ Russian.
Ọchịchị nke ịhụ mba n'anya na ndị ọgọ mmụọ na ihe oyiyi nke ikpere arụsị welitere nchegbu n'etiti ụfọdụ Rodnovers. Na 2002, nzukọ nche anwụ ọhụrụ Krug Yazycheskoi Traditsii (KYaT) hiwere na Moscow. Akwụkwọ ntọala ya, mkpesa Bitsa, katọrọ mba-chauvinism dị ka ihe ekwekọghị na mmụọ nke ikpere arụsị:
Omenala Okpukpe nke Slav (Rodnoverie), dị ka okpukpe ndị ọgọ mmụọ n’onwe ya - Omenala ndị ọgọ mmụọ n’ozuzu ha - enweghị echiche mba. Omenala ndị ọgọ mmụọ, dịka echiche ụwa na ezigbo okwukwe a ma ama, pụtara ma nwee ọfụma ọtụtụ puku afọ tupu oge ahụ n'akụkọ ihe mere eme nke ọha mmadụ, mgbe usoro mba mbụ pụtara. Ma ikpere arụsị mara mgbe niile ma kwenye n'echiche nke 'ndị mmadụ'Narod], ọ bụ ezie na ọ bụghị nke ukwuu na akụkụ ndu, mana kama na ọdịnala.
A na-anwa iji akara na okwu nke ndị ọgọ mmụọ mee ihe maka ebumnuche na-enweghị isi, dị ka ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ-chauvinist na 'Aryan' n'ezie, mana iji aha chi anyị na-enwu enwu kpuchie - eziokwu ndị dị otú a na-ewere ma nata nyocha kwesịrị ekwesị. na Mkpegharị a.
Hụ ụmụ amaala n'anya, ịkpa ike n'akụkụ ụwa dị ka Essences dị ndụ, ya bụ, Chukwu, nsọpụrụ maka chi - ndị nna nna ochie, ndị nna ochie na ndị mmụọ, kwesịrị ime ka ndị mmadụ bi n'otu ụwa bịaruo nso.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ Rodnoverie bịanyere aka n'akwụkwọ ahụ, dịka Krug Bera, Kolyada Vyatichei, Kupala, Moskovskaya Slavyanskaya Obshchina na Slaviya. Akwụkwọ ahụ bụkwa ndị na-akwado mkpesa Bitsa na-egosi na mmegide dị n'etiti KYaT na SSO SRV.
Ka o sina dị, ọ bụghị òtù Rodnoverie niile tinyere aka na esemokwu banyere ịhụ mba n'anya na mkpesa Bitsa. Otu n'ime ụlọ ọrụ nche anwụ Rodnoverie na-eto ngwa ngwa na 2000s bụ Velesov Krug (VK), nke hibere na 1999 site n'aka onye isi na-eto eto na onye edemede mara mma, Il'ya Cherkasov (Veleslav), onye nwere nzụlite na ọmụmụ na omume nke ime mmụọ nke Ọwụwa Anyanwụ na mysticism. Ọ bụ ezie na amaara nke ọma na enwere ndị otu na-ahụkarị mba n'anya na VK, nzukọ ahụ kwusiri ike na ha ga-akwado ọchịchị ma ọ kwadoghị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ya ihe omume. N'adịghị ka ọtụtụ ndị ndu Rodnoverie, Veleslav nwere mmasị ma tinye ya na nkuzi ya yana akụkụ gbara ọchịchịrị. Na mgbakwunye na Rodnoverie dị ka ndị dị otú a, ọ bipụtara na mbipute ya nke ụzọ aka ekpe, Navii tinye ' (ụzọ Nav, Sinzọ Sinister). [Foto dị n'aka nri]
Na 2000s, usoro Rodnoverie toro ngwa ngwa n'ihi ịntanetị. Na Russia, Rodnoverie so na okpukperechi mbụ iji weghara ohere nke oghere ịntanetị. Obere obodo mepụtara saịtị ma gosipụta foto nke mmemme ha n'ịntanetị. Inweta ihe onyonyo nke ememe mekwara ka otu ihe di iche n'echiche nke emume Rodnoverie kwesiri idi. Ndị mmadụ n'otu n'otu n'ime ime obodo nwere ike isonye na mkparịta ụka n'ịntanetị ma chọọ ndị nwere ọmịiko na mpaghara ha (Gaidukov 2013). Na mkparịta ụka ndị a, ọtụtụ kpughere na ha chere na ọ bụ naanị ha na-agbaso okwukwe oge tupu oge Ndị Kraịst wee gosipụta ịnụ ọkụ n'obi ha ịchọta obodo ndị a na ntanetị na ntanetị.
Mbelata nke ịchịisi ndọrọ ndọrọ ọchịchị mba dị iche iche n'ime gburugburu Rodnoverie, ma ọ bụ opekata mpe ngosi ha ghere oghe, bụkwa n'ihi iwu ndị na-emegide ọchịchị na 2002 Dabere na iwu ndị a, amachibidoro ọtụtụ narị akwụkwọ Rodnoverie dị ka ndị na-emebiga ihe ókè na ọtụtụ E mefuola òtù dị iche iche. N'etiti ndị edemede Rodnoverie mbụ, onye mbipụta ya dabara na ndepụta nke akwụkwọ amachibidoro bụ otu n'ime ndị nna ntọala nke otu ahụ, Dobroslav. Nkà ihe omumu ya bu ihe omuma banyere ihe omumu nke miri emi, inye onyinye nke okike, imegide ndi Semitism na obi uto nke National Socialism. Ọ nọ na-arụ ọrụ n'ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ Rodnoverie mbụ na 1997, ọ tọrọ ntọala nzukọ nzukọ, Russkoe Osvoboditel'noe Dvizhenie. Ka o sina dị, na 1990s, ọ laghachiri n'isi obodo ya gaa n'ime ime obodo na Kirov Oblast ibi ndụ dịka nkwenye ya si dị. [Foto dị n'aka nri] Dolọ Dobroslav ghọrọ ebe njem uka, ọkachasị maka ndị ntorobịa mba-n'anya ruo mgbe ọ nwụrụ na 2013 (Shizhenskii 2013). Ememe olili ozu Dobroslav, nke akpọbara ozu ya na ọkụ, bụ nnukwu ihe omume na mmegharị Rodnoverie.
Otu n'ime nnukwu ụlọ ọrụ ndị ọgọ mmụọ machibidoro dị ka ndị na-emebiga ihe ókè bụ Drevnerusskaya Ingliisticheskaya Tserkov 'Pravoslavnykh Staroverov-Inglingov Onye (DITPSI, nke na-esote ụlọ ụka Ingling) nke dị na Omsk, mana ọ nwere ọrụ na Russia niile. Chọọchị Ingling kwuru na ọ na-anọchite anya ọdịnala Aryan na-emebi emebi ma nwee ihe odide oge ochie nzuzo Slavyano-Ariiskie Vedy, akụkụ ya ụfọdụ bụ nke ndị Scandinavia oge ochie Ynglinga Saga. [Foto dị n'aka nri] Ozizi nke Chọọchị a nwere ụfọdụ nkwupụta pụrụ iche maka ịgụ usoro ndu na akụkọ ihe mere eme. Dịka ọmụmaatụ, ọ rụrụ ụka na ụmụ mmadụ nwere agbụrụ dị iche iche sitere na mbara ala dị iche iche nakwa na ndị nna ochie "Aryans" nwere ike ịdị ndụ ọtụtụ narị afọ. Thelọ ọrụ Rodnoverie kasịnụ katọrọ Inglọ Nzukọ Ingling, bụ nke kwuru na Chọọchị anaghị anọchite anya Okpukpe, ma a na-ere akwụkwọ ya n'ọtụtụ puku ma ọtụtụ ndị chọtara njem Rodnoverie site na Chọọchị Ingling.
Dika iwu ndi na-emegide mmegide, ndi ochichi bidoro megharia ihe nlere na Intanet na otutu ebe Rodnoverie na ebe a na-ekwu okwu, ebe ndi nlere anya na echetara ndi ozo banyere ntaneti banyere ihe puru iche nke nkwuputa. N'ụzọ dị otú a, a kpaliri ndị isi ụlọ ọrụ Rodnoverie ka ha mee nnyocha onwe ha na ịhọrọ ma ha dị njikere itinye nzukọ ha n'ihe egwu na arụrịta ụka. Na njedebe nke 2000s, echiche nke ọgba aghara mbụ, KYaT na SSO SRV abịarutewo, na-enyere ha aka ịmalite imekọ ihe ọnụ, n'agbanyeghị na ọrụ KYaT na 2010s emebiwo na ọtụtụ obodo ahapụla ya. Na 2009, akwụkwọ akụkọ ahụ Rodnoverie tọrọ ntọala. Ọ bụ nkwonkwo nke SSO SRV, KYaT, na VK na ọnụọgụ ọ bụla nwere ederede sitere n'aka ndị ode akwụkwọ sitere na ụlọ ọrụ ndị a niile. [Foto dị n'aka nri] organizationslọ ọrụ atọ a ewepụtakwala okwu ihu ọha n'aha nke Sovet Trekh (Kansụl nke Atọ). Otu n'ime ebumnuche kachasị nke nkwupụta ndị a bụ otu, ndị ode akwụkwọ ma ọ bụ ndị isi okpukpe, nke Kansụl na-ekwu na gha ụgha akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ kọwaara Paganism dị ka okpukperechi. Otu dị otu a na ndị mmadụ gụnyere, dịka ọmụmaatụ, Aleksandr Asov, Vladimir Golyakov, na Vladimir Kurovksii (1976 -), onye ndu ndị Ukraine Rodovoe Ognishche nke ahụ ewuwokwa ewu na Russia.
Na 2014, mgbakwunye nke Crimea na, ọkachasị, agha ahụ ke Ukraine kewara ndị mmegide mba Russia na ndị na-akwado omume Putin na ndị na-emegide ha. E keela Rodnovers n'okwu a. Ole na ole Rodnovers akwadola n'ihu ọha na Ukraine, mana ọtụtụ narị ndị agha Rodnoverie afọ ofufo hapụrụ Ukraine ka ha busoro ndị nnupụisi ahụ agha. Otu ndị agha mejupụtara Rodnovers, Svarozhitsi (Svarog batallion) nwere ihe karịrị ụmụ nwoke 800, tupu e jide onye ndu ya (Morin 2015). N'akụkụ nke ọzọ, n'etiti ndị agha Ukraine, Slavic Pagans na-esonye na ọgụ na ndị agha mba Azov. Isiokwu ahụ na-ebulite mkparịta ụka kpụ ọkụ n'ọnụ n'etiti Rodnovers na mgbasa ozi mmekọrịta. Organizationstù ndị isi anaghị ewere ọnọdụ ọ bụla na mgbakwunye nke Crimea ma ọ bụ agha na Ukraine, mana karịsịa n'etiti ndị na-ekpere arụsị na nnukwu obodo ndị dị ka Moscow na St. Petersburg, enwechaghị afọ ojuju na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Putin, ma ụlọ ma ndị mba ọzọ .
Enweghi nkwekọrịta kwenyere n'ozizi na Rodnoverie, na, n'agbanyeghị arụmụka mgbe niile, dịka ọmụmaatụ, ọdịdị ma ọ bụ eziokwu akụkọ ihe mere eme nke ụfọdụ chi ma ọ bụ emume, ọtụtụ Rodnovers na-atụle nnwere onwe nke akọ na uche na pluralism dị ka ụkpụrụ bụ isi nke okpukperechi. Ihe Rodnovers na-ekwukarị bụ na ha hiwere nkwenkwe ha na okpukpe okpukpe Slavic tupu oge Ndị Kraịst, ma ọ bụ ihe a maara banyere ya, na ọdịnala ndị Russia. Akụkụ nke abụọ nke okwu ahụ bụ "Rodnoverie" na-ezo aka n'okwukwe (vera) na ọtụtụ Rodnovers na-ahọrọ echiche a karịa okwu a bụ "okpukpe". Dika nkwuputa a si di, “okpukpe” na-egosi ihe siri ike na nhazi, ebe okwukwe di nfe karie ma dozie ya. Ọ bụ ihe a na-ekwukarị na ikpere arụsị bụ echiche ụwa ma ọ bụ nkà ihe ọmụma nke ndụ karịa okpukpe, n'ihi na, a na-arụ ụka, ọ dịghị achọ ka ndị mmadụ "kwere" ihe ọ bụla karịrị echiche ha.
Imirikiti mbipụta akwụkwọ na obodo Rodnoverie na-ekwenye na polytheism, mana enwere Rodnovers, ndị na-ewere chi dị iche iche dị ka ụdị dị iche iche nke otu chi na ọbụna onye na-ekweghị na Chineke Rodnovers, bụ onye ghọtara chi dị ka akara maka ihe ịtụnanya na ike. Communitiesfọdụ obodo nwere chi dị ka Rod, Svarog, Triglav ma ọ bụ Dazhdbog dị ka chi kachasị elu. Iji maa atụ, Veleslav (2016: 26) dere, sị:
Dabere na Slavic Rodnovery, Chi kachasị elu nke ụwa (Triworld) na ịdị adị niile e kpebiri bụ Svarog (cf. Brahma), Onye Okike, Demiurge nke Eluigwe na Ala. Ndị Chineke nke ụwa nke bụ (Triworld) nọ n'okpuru Svarog (dị ka onye nna nna ya), Chi dị iche iche na-ekerịta aha Svarozhichi - Dazhdbog, Perun, wdg.
N'ime obodo, ikekwe chi ndị kachasị ewu ewu bụ chi nke égbè eluigwe na nke ndị agha, Perun na nke uri, nka, na ehi, Veles. Ọ na-abụkarị obodo na ndị mmadụ n'otu n'otu họrọ "ịgbaso ụzọ" nke otu n'ime chi ndị a dabere na mpaghara ha nwere mmasị. N'ihi nke a, Perun na-abụkarị chi dịkarịsịrị ike na obodo ndị metụtara obodo. Ọtụtụ chi jikọtara na oge, dịka chi nwanyị Mara, nke na-anọchite ọnwụ na oge oyi. Lada bụ chi nke ịhụnanya, ezinụlọ, na ihe ọkụkụ, ebe chi nwanyị akara aka na ala mmụọ bụ Makosh. Ndepụta nke chi dị iche iche arụpụtaghị ma ọlị, mana nkọwa nke chi niile dị iche iche na nkọwa ha karịrị ihe ederede a. N'ihi ihe omuma nke uzo nke ọdịnala ndi Kraist na ndi ozo di iche, enwere otutu nghota nke Slavic pantheon. Okwu a metụtakwara ịdị arọ e nyere n'ihe ọmụmụ nke ndị ọkà mmụta banyere akụkọ ihe mere eme na mkpa ọ dị izi ezi nke akụkọ ihe mere eme. A na-akatọ ọtụtụ chi, dị ka Rod, Kupala, ma ọ bụ Chislobog dị ka ihe ọhụụ ọhụụ nke ụfọdụ Rodnovers mere, mana ndị ọzọ na-eleghara ihe e zoro aka na ọmụmụ agụmakwụkwọ nke akụkọ ihe mere eme anya ma na-ezo aka na isi ikike. Ndị ọzọ na-ewere izi ezi nke akụkọ ihe mere eme dị ka ihe mmụta ime mmụọ nke chi ndị a.
N'ime emume ndị a, a na-asọpụrụ chi dị iche iche, mana Rodnovers na-achọkarị ịkọ ọdịiche dị n'etiti omume Ndị Kraịst nke ndị ọgọ mmụọ na (Ọtọdọks) banyere chi. Otu okwu a na-eme ugboro ugboro na ngagharị a: "Anyị abụghị ndị ohu Chineke, kama anyị bụ ụmụ." Okwu a na-ezo aka n'okwu Ọtọdọks nke na-eme ka a mata ndị kwere ekwe dị ka "ndị ohu nke Chineke" ma na-egosipụta mmụọ ka nha anya nke ndị ọgọ mmụọ na chi ha. A na-ekwu, n'ụzọ ihe atụ ma ọ bụ na ọ bụghị, na Slav bụ ụmụ ụmụ Dazhdbog. Rodnovers na-asọpụrụ chi dị iche iche, mana ọtụtụ n'ime ha jigidere ikike na mkpa nke onye ọ bụla ime mkpebi nke aka ya dị ka onye maara ihe, na ihu nsonaazụ nke omume ha.
A kọwara Rodnoverie mgbe niile dị ka okpukpe ọdịdị ma ọ bụ okwukwe (prirodnaya vera) na iguzobe njikọ nye ọdịdị na inye ya nsọpụrụ bụ ihe dị mkpa n'ime mmegharị ahụ. Agbanyeghị, enwere ike ịghọta ọdịdị sitere na usoro ịhụ mba n'anya dị ka nke anyị, nke Slavic, ma ọ bụ nke Russia. Kinddị echiche a na-eme ka nkewa nke agbụrụ na-eme ka nkewa nke agbụrụ na nkewa na-agbanwe agbanwe na gburugburu ha (Ivakhiv 2002). N'otu oge ahụ, Rodnovers nwekwara ike inwe njikọ miri emi na mpaghara ha karịa Russia dị ka steeti. N'ime nnyocha, nke Roman Shizhenskii duziri, Rodnovers mara echiche nke ala nna (Rodina) n'ọtụtụ ụzọ, dịka "mpaghara nke m nwere ike ịgagharị n'otu ụbọchị" kama ijikọ ya na steeti Russia (Shizhenskii na Aitamurto 2017). Ka o sina dị, na n'oge a Rodnoverie, ịhụ mba n'anya bụ n'ezie àgwà zuru ebe niile. Ma ọ dịkarịa ala oge niile akọwapụtara dị ka ọnọdụ ime mmụọ okike, a na-ewepụta Rodnoverie dị ka okwukwe ndị nna ochie. Thesọpụrụ ndị nna nna bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe a na-ahụkarị na ihe odide na Rodnoverie dị ka nsọpụrụ nke chi. Ọtụtụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ Rodnovers, na-anabata dị ka ndị otu naanị ndị nna ochie Slavic. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị na-egosi na iwu a nwere ike ịgbagide ndị mmadụ anya, ndị ọdịdị ha adịghị iche na ndị Russia, ebe ihe nketa ndị Juu nwere ike iduga nchụpụ.
Rodnovers na-ekwusi ike na ịdị adị nke ndụ, ndụ n'ime ebe a na ugbu a. Ha na-ekwu na ndị mmadụ ga-enweta nsonaazụ nke omume ha na ndụ a. Ọtụtụ na-azọrọ na ndị mmadụ ga-etinye aka na ndụ ka mma na ichekwa okike n'ụwa a kama ịtụgharị uche na nke karịrị akarị. A na-agba akaebe na elekwasị anya na enweghị ike arụmụka banyere arụ mgbe a nwụsịrị. Ka o sina dị, n'ihi ọtụtụ nke Rodnoverie, e nwekwara ndị na-akwado ya na ndị edemede, ndị kwenyere n'ịlọ ụwa, ma ọ bụ ndụ mgbe a nwụsịrị, nke a na-akpọkarị Iriya, nke a ga-akwụghachi ezigbo ọrụ. Echiche zuru ụwa ọnụ banyere ụwa na-ekewa ya ụzọ atọ: Nri, Nav, na Yav. Uzo esi aghota ihe ndia di iche ma, n'uzo di nkpa, enwere ike kowaa ndia dika ala di ala (Nav), ụwa anyị (Yav), na ụwa elu ma ọ bụ ụwa nke echiche (Nri).
Kalenda Rodnoverie dabere na usoro okirikiri na ọdịnala ndị obodo Russia. Ihe ato ato bu solstice summer (Kupala), winter solstice (Kolyada), na Maslenitsa (Shrovetide) na Machị. Ememe ndị ọzọ gụnyere, n'etiti ndị ọzọ, oge mgbụsị akwụkwọ mgbụsị akwụkwọ Kwuru na ụbọchị nke Perun na July, na, n’ikpeazụ, ụbọchị nke Veles na February. Obodo Rodnoverie nwekwara ọtụtụ ezumike ndị ọzọ, mana aha na ụbọchị dịgasị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, na 2018, ma SSO SRV na VK na-eme njikọ spam nwoke na nwanyị Yarilo Veshchii on May 23, ma VK nwekwara abụọ ọzọ ememe na mmalite nke okpomọkụ na May, na Krasnaya gorka na Lel'nik na May 22. communitiesfọdụ obodo na-eji aha nke Rodnoverie nke ha ọnwa ole na ole, sitere na ọdịnala Russia. Obodo Rodnoverie na-ahazi agbamakwụkwọ na ememe maka inye aha ndị ọgọ mmụọ (imyanerechenie). Somefọdụ obodo nwekwara emume ịsacha baptism, raskreshchenie.
A na-eme ememme ahụ n'èzí n'ọhịa ma ọ bụ n'ogige ntụrụndụ. [Foto dị n'aka nri] Obodo na-enwekarị ebe ndị ha kwuru kpọmkwem, ebe ha na-ewu ihe oyiyi osisi nke chi, nke a na-akpọ arụsị ma ọ bụ churs. Rodnovers nwere ike ọ gaghị enwe ala nke ụlọ arụsị ndị a, ma na-ebibi arụsị mgbe niile. Dịka, obodo nwere ememme ndị na-emeghere onye ọ bụla na ememe maka naanị ndị otu. Enwere ike ịchọta ndị na-ege ntị kachasị elu n'oge ememme Kupala, mgbe ihu igwe na-enye ndị mmadụ ohere ịkwụ ụgwọ na saịtị nke mmemme maka ụbọchị ole na ole.
A na-eme emume ndị a n’akụkụ ọkụ ma ọ bụ arụsị. Ndi isi (ma obu isi) nke obodo na-eduzi ha n'ime gburugburu nke ndị sonyere. Ọdịnaya nke ememe ndị ahụ na-adabere na ememme ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ememe nke Kupala ga-enwerịrị ntụnye aka na mmiri na ọkụ, ihe ndị bụ isi nke mmemme ahụ, mana otu esi etinye ha na akara nwere ike ịgbanwe kwa afọ. A na-ejikwa osisi, ahịhịa, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-adịru nwa oge eme ihe arụsị nke chi. Dịka ọmụmaatụ, na Maslenitsa nke Marena, chi nwanyị oyi na-akpọ ọkụ dị ka ihe ịrịba ama nke njedebe nke ọchịchị ya. N'ime emume a, a na-akpalite chi ma na-echekwa aja na chi nna nna ha. Ihe ndị dị mkpa bụ ịgba egwu (khorovod) na ịwụnye n’ọkụ. [Foto dị n'aka nri] Ọ bụ omenala na ndị sonyere na-asọpụrụ ememme ndị ahụ site na iji ejiji nke ọdịnala ọdịnala Russia ma ọ bụ nke Slavic, dị ka uwe elu linin ọcha na-acha uhie uhie mara mma maka ụmụ nwoke. Na mbụ ọtụtụ obodo Rodnoverie jiri Swastika dịka akara ha. N'oge a, mgbe amachibidoro iji Swastika eme ihe n'ihu ọha, akara ngosi kachasị maka Rodnoverie bụ Kolovorot na-anọchi anya anyanwụ. [Foto dị n'aka nri]
Onweghi otu onye ekwere Rodnoverie onye ndu ma obu nhazi. N'isiokwu a, enwere ike ikwurịta naanị ndị a ma ama ma ọ bụ ndị isi ama ama, ịhapụ hapụ ndị pere mpe, ma ọ bụ ndị nwere aha njirimara. Na mgbakwunye na òtù ndị ahụ, enwere ndị nkuzi na ndị edemede ma ọ bụ ndị nwere mmụọ na-adọrọ adọrọ, ndị anaghị esonye n'obodo Rodnoverie ọ bụla. N'agbanyeghị echiche na-adịgide adịgide nke nnwere onwe na ọbụnadị enweghị enyemaka, obodo Rodnoverie na-enwekarị onye ndu na ụfọdụ ndị otu na-eduga. N'ime ndị isi, ndị otu nwere ike ịnwe ụdị aha nsọpụrụ dị iche iche ma ọ bụ mpaghara ọrụ. Ọtụtụ obodo na ọkachasị ndị otu nche anwụ nwere kansụl a na-akpọ veche mgbe nzukọ Russia na-ewu ewu oge ochie. Ọ bụ ezie na enweghị ozi a pụrụ ịdabere na ya na ọnụọgụ ma ọ bụ ọnọdụ mmekọrịta akụ na ụba na mmekọrịta nke Rodnovers, imirikiti ndị ọkà mmụta nke isiokwu ahụ kwenyere na ụmụ nwoke karịrị ụmụ nwanyị karịa. N'ikwekọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị isi niile a ma ama bụ ụmụ nwoke (lee Aitamurto 2013).
Ná ngwụsị nke puku afọ ahụ, e debara aha ụfọdụ obodo Slavic Pagan aha dị ka òtù okpukpe, mana n'ikwekọ n'ụzọ siri ike nke ndị ọchịchị, ha niile efunahụla ọnọdụ a site na 2010s. N'etiti ndị Rodnovers, enwere echiche dịgasị iche banyere ndebanye aha gọọmentị. Fọdụ na-elekwasị anya n'ọkwá nke òtù okpukpe e debara aha ha n'akwụkwọ, iji wusie ọnọdụ ndị ọgọ mmụọ ike. Ka o sina dị, ndị ọchịchị agọnarịrị arịrịọ maka ndebanye aha na ndabere, dịka ọmụmaatụ, eziokwu ahụ bụ na enweghị ike iwere Rodnoverie n'okpukpe. Ihe ka n'ọnụ ọgụgụ na-eche na ọnọdụ nke nzukọ okpukpe nwere ike iweta ọtụtụ nsogbu. Enwere ike machibido otu nzukọ okpukpe debara aha ya n'akwụkwọ dị ka onye na-emebiga ihe ókè, nke ga-abụkwa nke a ga-eche n'okpukpe niile a machibidoro. Ọnọdụ nke nzukọ okpukpe nwere ike ịdọta uche ndị ọchịchị karịa obodo "ọdịbendị" ma ọ bụ "ọha" nke na-azọrọ na ha lekwasịrị anya na mweghachi nke “ọdịnala” Russia ma ọ bụ Slavic. Isi ụlọ ọrụ Rodnoverie emebeghị ihe iji debanye aha ha dị ka òtù okpukpe. Dịka ọmụmaatụ, SSO SRV nwere aha "otu nzukọ."
N’ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọnọdụ nke nnwere onwe okpukpe emebiwo na Russia. A kpagbuola okpukpe ndị pere mpe site na mmachi na-egbochi ọrụ ha na site na ịmachibido ha n'okpuru nkwenye nke ịkwalite extremism. Ruo 2010s, e kwere ka Rodnoverie rụọ ọrụ n'enweghị ihe ọ bụla ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ okpukpe ndị ọzọ pere mpe. Ihe kpatara ya bụ na Rodnoverie bụ obere mmegharị; ọ nọgidere ọbụna karịa-adịghị ahụ anya, n'ihi na ọ dịghị centralized òtù na ememe na-eduzi na ọdịdị kama na kpọmkwem ụlọ; ọ bụghị “okpukpe ala ọzọ” ma ọ bụ okpukpe nwere mmekọrịta zuru oke na mba ọzọ, ebe ọ bụ na ndị a bụ ndị mbụ e mesoro mmegbu; na n'ihi na Rodnoverie nwere nkwado ụfọdụ n'etiti ụdị ọnọdụ steeti dịka ndị agha na ndị mmanye iwu. Na 2010s, ọrụ nke Chọọchị Ọtọdọks nke Russia (ROC) toro na ọha mmadụ Russia ma na-elekwasị anya na Rodnoverie ọtụtụ mgbe. Na ọkwa mpaghara, ndị nnọchi anya ROC agbaala ndị ọchịchị ume ka ha were akara siri ike na Rodnoverie. Ọtụtụ ndị nọ n'ọkwa dị elu na ROC ekwuola okwu, nke Rodnoverie ma ọ bụ neo-Paganism bụ isi nsogbu ọha na eze na ihe omume dị elu ejirila dịka ikpo okwu iji kwalite echiche a (Skrylnikov 2016). N'ihi ya, ọ ga - ekwe omume na ndị ọchịchị Russia ga - eme omume mmegbu karie Rodnoverie n'ọdịnihu.
Ihe ịma aka ọzọ dị mkpa maka Rodnoverie na onyinyo ya n'ihu ọha na-apụta site na ọdịdị ya na nke ọdịiche dị iche iche. Okwu nke ndị mmadụ na otu dị iche iche na-eme ịkpa ókè agbụrụ, mgbochi Juu, na ọbụnadị omume ndị na-eyi ọha egwu ma gosipụta onwe ha dịka Rodnovers nwere ike imerụ ọdịdị nke mmegharị ahụ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị nsogbu siri ike, echiche dị iche iche na-agba izu, akụkọ sayensị na-enweghị isi na usoro ihe ọmụmụ na-emetụtakwa ụzọ Rodnoverie si eche echiche n'ihu ọha. N'ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ndị isi ejiriwo mkpebi siri ike megide ndị a, mana ọkachasị n'ógbè ahụ, ụfọdụ obodo Rodnoverie ka kwenyere n'okwu ndị dị otú ahụ dị ka mmalite ndị Russia nke ndị Fero nke Egypt ma ọ bụ na ndị Slav oge ochie nwere ikike karịrị nke mmadụ. A na-emegharị ụdị nkwupụta ndị a na saịtị ndị na-achọ imebi Rodnoverie. Ọ bụrụ na ịhụ mba n'anya na-aga n'ihu na-ekpebi ọtụtụ ihe mmegharị ahụ, okpukpe ahụ na-anọgide ma ọ bụ bụrụ ihe na-adịghị mma nye ndị mmadụ, ndị na-emegide ịkpa ókè agbụrụ na iwepụ ndị mmadụ na agbụrụ ha. Ndị dị otú ahụ, ndị nwere ike ịchọpụta ọdịdị nke ọdịdị ọdịdị na nkwenkwe nkwenkwe nke ikpere arụ na-adọrọ mmasị, nwere ike ịgbanwe gaa n'okpukpe ndị ọzọ nwere atụmatụ ndị yiri ya.
Foto # 1: SES nwere ndị otu nọ na mpaghara dị na Russia yana Belorussia na Ukraine.
Image # 2: Akwụkwọ ahụ Navii tinye ' (ụzọ nke Nav, Sinzọ Sinister) nke Il'ya Cherkasov (Veleslav).
Foto # 3: Aleksei Dobroslav na obodo obibi ya na Kirov Oblast.
Image # 4: Ihe edere na nzuzo oge ochie Slavyano-Ariiskie Vedy nke Ingka Ingling kwuru na ha nwere.
Foto # 5: Cover nke akwụkwọ akụkọ ahụ Rodnoverie.
Foto # 5: Rodnovers na-ekere òkè n'ememe na mpaghara ọhịa.
Image # 6: Rodnovers na-awụli elu na ọkụ na omenala Maslenitsa.
Aitamurto, Kaarina. 2016. Okpukpe, Omenala, Nationalism: Nkọwa nke Russia Rodnoverie. Milton Park na New York: Ntugharị.
Aitamurto, Kaarina. 2013. "Okike na Russian Rodnoverie." Pọmigranet. Akwụkwọ bụ International Journal of Pagan Studies 1-2: 12-30.
Belov, Aleksandr. 1993. Slavyano-goritskaya bor’ba: Iznachal’e. Moscow: NKDR.
Drevnerusskaya Ingliistiicheskaya tserkov 'Pravoslavnykh Staroverov-Inglingov. 2007. Slavyano-Ariiskie Vedy M. Omsk: Asgard.
Mkpesa Bitsa. 2002. Nweta site na http://slavya.ru/docs/bitc_obr.htm na 20 August 2018.
Gaidukov, Alexey. 2013. "Russian asụsụ Russian na Rodnoverie." Pp. 315-32 na Ihe Omume nke Oge A na Ndị Ala Na-eme Ihe n'Ebe Etiti na n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe, nke Kaarina Aitamurto na Scott Simpson dere. Durham: Acumen.
Ivakhiv, Adrian. 2002. “Ọdịbendị na agbụrụ dị na ikpere arụsị Ọwụwa Anyanwụ Europe: ụkpụrụ omume gburugburu ebe obibi nke ikike okpukpe?” Religion 32: 303-14.
Kresen, Bus (ezumike, nsụgharị, nkọwa) (Asov, Aleksandr) 1992. Russkie Vedy. Pesni ptitsi Gamayun. Velesova kniga. Moscow: Nauka i religiya.
Morin, Onyekachi. 2015. "Nbili na attda Ọwụwa Anyanwụ Ugwu Ukraine n'agha niile." Nweta site na https://www.vice.com/en_us/article/qbxpnq/the-rise-and-fall-of-eastern-ukraines-all-pagan-battalion-513 na 20 August 2018.
Moroz, Evgenii. 2005. Istoriya “Mertvoi vody” - ot strashnoi skazki k bol'shoi politike. Politicheskoe neoyazychestvo v postsovetskoi Rossii. Stuttgart: ibid-Verlag.
Shizhenskii, Roman V. 2013. Na amamihe ya dobroi sily: Zhizn 'i tvorchestvo Dobroslava. Moscow: Orbita.
Shizhenskii, Roman na Kaarina Aitamurto. 2017. "Ọtụtụ Mba na Patriotism n'etiti Russia Rodnovers. ” Pp. 109-32 na Ọchịchị obodo, ịhụ mba n'anya, na ikpere arụsị nke oge a, nke Kathryn Rountree deziri. New York: Palgrave Macmillan.
Skrylnikov, Pavel. 2016. "Churchka megide okpukpere chi ọhụrụ." Nweta site na http://intersectionproject.eu/article/society/church-against-neo-paganism na 20 August 2018.
Veleslav, Volkhv. 2016. Nnukwu Ozizi Ezigbo. Logha.